मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-04 > उहाँका जनहरूसँग परमेश्वरको सम्बन्ध
जब कुनै मानिस पुरातन आदिवासी समाजमा बच्चालाई धर्मपुत्र बनाउन चाहन्छ, उसले एउटा साधारण समारोहमा निम्न शब्दहरू भन्यो: «म उसको बुबा हुनेछु र ऊ मेरो छोरो हुनेछ। Marriage विवाह समारोहको क्रममा यस्तै वाक्यांश भनिएको थियो: «उनी मेरी श्रीमती हुन् र म उनका पति हुँ» साक्षीहरूको उपस्थितिमा, उनीहरूले एक अर्कासँगको सम्बन्ध रिपोर्ट गर्यो र यी शब्दहरू मार्फत यसलाई आधिकारिक रूपमा वैध घोषित गरियो।
किन यति धेरै पटक दोहोरिन्छ? यो इजरायलको निष्ठाको कमीले गर्दा सम्बन्ध श the्कास्पद भएको थियो। इस्राएलले परमेश्वरसंगको आफ्नो करारलाई बेवास्ता गरेको थियो र अरू देवीदेवताको पूजा गर्‍यो। त्यसकारण, परमेश्वरले उत्तरी कुलहरूलाई अश्शूरले कब्जा गर्न दिनुभयो र मानिसहरू त्यहाँबाट लगियो। पुरानो नियमका प्रायः अगमवक्ताहरू यहूदा राष्ट्रको विजय हुनुभन्दा केही समय अघि र बेबिलोनीहरूले दासत्वमा प्रवेश गरे।
मानिसहरू छक्क परे। सबै समाप्त भयो? के परमेश्वरले हामीलाई अस्वीकार गर्नुभयो? भविष्यवक्ताहरूले विश्वस्त हुँदै दोहोर्याए: होइन, भगवान्‌ले हामीलाई त्याग्नुभएको छैन। हामी अझै उहाँका मानिसहरू हौं र उहाँ अझै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भविष्यवक्ताहरूले एक राष्ट्रिय पुनर्स्थापनाको भविष्यवाणी गरेका थिए: मानिसहरू आफ्नो देश फर्कनेछन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरतिर फर्किनेछन्। भविष्यको फारम अक्सर प्रयोग गरिन्छ: "तिमी मेरा मानिस हुनेछौ र म तिम्रो परमेश्वर हुनेछु"। परमेश्वरले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुभएन; उसले सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्दछ। उसले यो गर्नेछ र यो यो भन्दा राम्रो हुनेछ।
यशैया अगमवक्ताको सन्देश
अगमवक्ता यर्मियाको सन्देश
भविष्यवक्ता इजकिएलको पनि यस्तै सन्देश छ
साना अगमवक्ताहरूको सन्देश